रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधे अझै कति मान्छे मा*र्ने? (भिडियो) – ताजा समाचार
रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधे अझै कति मान्छे मा*र्ने? (भिडियो)
पाेखरा ८ असाेज- नेपाली चर्चित पत्रकार रबी लामिछानेले अाेम अस्पताल लाइ साेभे अब कति मान्छे मा*र्नै । काठमाडौंको चावाहिलमा रहेको ओम अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा धादिङको गंगाजमुना गाउपालिकाकी २९ वर्षीया अनिता गुरूङको अस्पालको गम्भीर लापरबाहीका कारण मृ*त्यु भएको आफन्तले आ*रोप लगाइरहेपनि आफन्तले २० लाख नदग लिएपछि घटना शान्त भएकाे हाे ।
अनिताको मृ*त्यु भए लगत्तै चिकित्सककै लापरबाहीका कारण उनको मृ*त्यु भएको आ*रोपमा आफन्तले अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेर हंगामा न मच्चाए । ओम अस्पतालका युरोलोजिस्ट तथा प्रोफेसर डाक्टर भोलाराज जोशीले अनिताको अपरेशन गरेका थिए । आफन्तका अनुसार अस्पतालले सामान्य शल्यक्रिया गर्ने भनेको थियो ।
अनिता पनि हाँसी–हाँसी अप्रेशन थिएटर भित्र गएको भए पनि अचानक कसरी मृ*त्यु भयो ? ओम अस्पतालमा यस अघि पनि धेरैले उपचारका क्रममा ज्यान गु*माएका छन् । यही प्रश्न रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधेका छन् । अाेम अस्पतालले निकै लापरवाही गरेकाे बिरमिकाे भनाइ रहेकाे छ ।
चर्चित पत्रकार रबी लामिछानेले साेधेकाे प्रश्न यस्ताे छ हेर्नुहाेस् भिडियाेः